”Warra ajjeesan qofa osoo hintaane warra ajjeesisan hojii hiiksisaa jirra” – Kichuu
HomeAfaan OromooNews”Warra ajjeesan qofa osoo hintaane warra ajjeesisan hojii hiiksisaa jirra”
”Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata isaa cal jedhee bakkeetti hin gatu”
Sanbataafi Dilbata Darbe miseensonni poolisii adda Somaalee Hararge Lixaa aanaa Cinaaksanitti halleellaa egaalaniin walitti bu’iinsa dhalateen lubbuu namaa irratti miidhaan qaqqabuu Waaajirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibseera.
(bbc)—-Akkasuma Godina Gujii Lixaatti rakkoo uummata Geediyoo fi Oromoo daangaa Oromiyaarra jiran gidduutti dhalateen miidhaan qaqqabeera.
Hooganaa Waajira Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Dr. Nagarii Leencoo.
Naannoolee Oromiyaa daangessanitti rakkoon nageenyaa daangaa bu’uureffate irra deddeebiin dhalachuun dhimma daangaa qofa osoo hin taane, dubbii biraa akka qabu hoogganaa dhimmoota Kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Lencoo ni himu.
”Kaayyoon isaa kan biraa ture wayita isaan uummata Oromoo hamma Kanaan buqqisan, Oromoonis immoo uummata Somaalee Oromiyaa keessa jiru akka inni buqqisu, yeroo isaan uummata irratti dhukaasa bananii namoota ajjeesan mootummaan naannoo Oromiyaas poolisii ajajee akka inni waraana labsee waraanatti galuuf tuttuqaadha” jedhan.
Torban darban kanaas miseensota poolisii addaa Nannoo Somaaleetiin Aanaa Cinaaksanitti rakkoon dhalate , ”namoonni harka namaatiin abidda qabatan kun amma qabsoo isa dhumaa gaggeessaa akka jiran nuu gala, uummannis kana hubachuu qaba” jedhu Dr. Nagariin.
Mootuummaan Naannoo Oromiyaa rakkoolee naannoo daangaatti ka’aa jiran Kanaaf furmaata waaraa fiduuf hojiilee hojjechaa jira jedhan keessaa tokko marii bulchiinsa naannoo Somaalee Wajjin gaggeesuu akka ta’e ji’a lamaan kana ministirri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin Jijjigaatti marii gaggeessan yaadachuun ibsaniiru.
”Namoonni hedduun yeroo uummata keenyarratti dhukaafamu, yeroo manni isaanii gubatu mootummaan nannoo Oromiyaa wanuma callisee ilaaluu itti fakkaata. Dubbiin garuu akkas miti” jedhu Dr. Nagariin
”Warra nama buqqisan qofa osoo hin taane warra nama buqqisiisan, warra nama ajjeesan qofa osoo hin taane warra nama ajjeesisan hojii hiiksisaa jirra” kan jedhan Dr. Nagariin.
Hamma qamoota kana hojiin ala gochuu xumuramutti garuu uummata naannichaaf eegumsa barbaachisu akka taasisan himaniiru.
”Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata isaa cal jedhee bakkeetti hin gatu, qaamni nageenyaa Oromiyaas akkas hin godhu, eegumsa ni goona” jedhaniiru.
Daangaa naannolee Somaalee fi Oromiyaa adda baasuun bara 2009 adda kan cite rakkoodhuma nagenyaanii kan jedhan Dr. Nagariin hojii daangaa adda baasuu hojjechuuf haala dandeessisu uumuuf mootummaan naannoo hojjechaa jiraachuus himaniiru.
2009 keessa hojii daangessuu ciminaan itti deemamaa kan ture daanga’uun isaa kaayyoo isaanii jalaa fashaleessa waan ta’eef gidduutti uummata buqqisuu fi miidhuun calqabuun jechuunis dubbatu.
Hojiin Daangaa naannolee lameenii adda baasuu xumuruuf nagaanyi barbaachisaa ta’uu fi fuula tokkoon nagaa buusuun gara daangessitti kan deebi’amu akka ta’es Dr. Nagariin BBC tti himanii jiru.
Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Aministii Intarnaashinaal gabaasa torbee darbe baaseen rakkoon daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti dhalachaa jiru daangaa naannolee lameenii ifatti adda baasuun furamuu danda’a jechuun ni yaadatama.
“Oromooni Naannoo somaaleerraa sababa Oromoo tahanif qa’ee isaanirraa buqaa’ani aanaarra turan keessaa waarri Aanaa Burqaa Tirtiraa iyyaannadhaf Harar godina dhufanii jiran – https://t.co/RGrKIcjtPn pic.twitter.com/Vllaz2WkRx
— Kichuu (@kichuu24) June 12, 2018
Godinii Oromiyaa naannoo Somaaleetiin walti dhiyaatu dhiba guddaa keessa jiraa ganna lamaan kana fa keessa bu’uura misoomaa hedduullee irraa akka fedhetti faayidaa argachuutti hin jiru.
(voaafaanoromoo)—Rakkoon tun ganna lamaan dabaran fa guddoo hammaatte jedha itti gaafatamaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr.Tolaa Bariisoo.
“Walumaa gala godina Harargee lamaan, Baalee,Booranaa fi Gujii lamaan keesatti manneen baranotoaa 159 tahanitit cufaman, samaman ykn caban.Gatiin isaa qarshii miliyoona 43.3 oli.”
Ka maatii waliin naannoo Somaalee Jijjigaa baqatanii dhufan waliin ijoollee 65,000 caalan akka kanaan barumsa isaanii male dhabe,jidduutti kute.
Taatullee akka Dr.Tolaan jedhutti ijoollee tana gara manneen barnootaa nagaa tahanitti geessanii barsiisan.
Oromoo Jijjigaa baqatanii dhufan magaalaa Oromiyaa 11 keessatti qubsiisanii ijoollee warraallee manneenuma itti dhiyaatan keessatti barsiisan jedha Dr.Tolaan.
Taatullee ammallee ijoollee 22,000 tahanitti akka Dr.Tolaan jedhetti barumsatti hin galmaahin.
“Eegii dhufanii yeroon barumsaa waan isaan darbeef.Rakkoon tokko kan nu qunname ijoolleen kun achitti Afaan Somaaletiin baratan.Asitti Afaan Oromootiin barumsa kennina,” jedha Dr.Tolaan.
Ijoollene hin galmaahin hagii guddaan ijoollee didiqoqo akka jecha Dr.Tolaatti.
Ijoollee 65,000 tun kutaa 1-12 baratan manneen barnootaa itti dhiyaatanitti raranii barsiisanillee kutaa silaa nama 40-45 qofa qabatti jedhanitit ammoo akka jecha itti gaafatamaa Biiroo Barnoota Oromiyaatti ijoollee 70-80 tahan walti naqanii barsiisan.
Gaafa Oromoon kuma hedduu Jijjigaa baqatte sun barsiisota 437 achii dhufee jara kanallee ya hujii qabsiimne jedha Dr. Tolaam.
Ijoollee manneen barnootaa kanatti galchanilllee akka jecha Dr.Tolaatti nyaataa fi mi’a barnootaallee hinuma kennaniif.
Biiroon barnootaa ganna dhufu keessaa manneen barnootaa caacaban kana jaartee hujiitti deebisuuf akka jecha Dr.Tolaatti bajata baafattee itti jirti taatullee laftii itti baratan sun nagaa tahuu malte qaraa. Itoophiyaatti dhiyoo tana ijoollee kutaa 10 fi 12tti Qormaaa Yuniversitin seenan fudhate.
Lafa Liyuu Poolisiin keessatti nama aatu ammoo akka maatiin ijoollee jedhanitti ijoolleen hedduutti qormaata kana hin fudhatain adoo fudhatanillee ittuu hin qophoomne.
Akka Dr.Tolaan jedhutti ammoo maatii waliin mari’atanii hin barannee jedhnii qormaata fudhachu dhabu mannaa fudhachuu wayyaa jedhanii fudhachiisan.
Oromiyaa keessa akka jecha itti gaafatamaa Biiroo Barnootaa Oromiyaatti manneen barnootaa 16,000 jiraa ijoollee miliyoona 10ti keessa barata.